ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဝနျထမျးမြားကို အိမျမှတဈဆငျ့ အလုပျလုပျခှငျ့ပေးလိုကျသညျ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။ – SoShwe
Home/Tech/ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဝနျထမျးမြားကို အိမျမှတဈဆငျ့ အလုပျလုပျခှငျ့ပေးလိုကျသညျ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဝနျထမျးမြားကို အိမျမှတဈဆငျ့ အလုပျလုပျခှငျ့ပေးလိုကျသညျ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
နာမညျကြျော Social Media ကုမ်ပဏီကွီးတဈခုဖွဈတဲ့ Twitter ကုမ်ပဏီသညျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ဝနျထမျးမြားကို အိမျမှတဈဆငျ့ အလုပျလုပျရနျ ခှငျ့ပွုပေးခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ Twitter အနဖွေငျ့ ဟောငျကောငျ၊ ဂပြနျနဲ့ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှ ဝနျထမျးမြားကို အိမျမှတဈဆငျ့ အလုပျလုပျရနျ ညှနျကွားခဲ့သညျ့အပွငျ သူတို့ရဲ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးရှိ ဝနျထမျးပေါငျး (၅) ထောငျကိုလညျး ရုံးမတကျဘဲ အိမျမှတဈဆငျ့ အလုပျလုပျခှငျ့ပေးခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
အဆိုပါညှနျကွားခကျြမထုတျပွနျခငျ တဈရကျအလို၌ အလုပျကိစ်စဖွငျ့မလိုအပျဘဲ ခရီးသှားခွငျး၊ ပှဲလမျးသဘငျမြားသှားရောကျခွငျးကို တားမွဈခဲ့ပါသေးတယျ။ Twitter ရဲ့ လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈ အကွီးအကဲဖွဈသူ Jennifer Christie ကလညျး “ကြှနျမတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြက ကမ်ဘာအနှံ့နဲ့ ကြှနျမတို့ ပတျဝနျးကငျြကွားထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပြံ့နှံ့မှုနှုနျးကို လြှော့ခနြိုငျဖို့ဖွဈပါတယျ။” ဟု ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Twitter သညျ အိမျမှတဈဆငျ့အလုပျလုပျနိုငျသညျ့အစီအစဉျကို လှနျခဲ့သညျ့ကာလမြားတညျးက ဖျောဆောငျနခွေငျးဖွဈပွီး “အခုကိစ်စက ကြှနျတျောတို့အတှကျ ကွီးမားတဲ့အပွောငျးအလဲတဈခုဖွဈသလို ပိုပွီးဝေးလံခေါငျဖြားတဲ့ဒသေက ဝနျထမျးတှကေိုပါ Twitter နဲ့ ပူးပေါငျးနိုငျဖို့ ရှတေ့ဈလှမျးတိုးလိုကျတဲ့ အနအေထားလညျးဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာဝနျဆောငျမှုပေးနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈပွီး ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာရှိတဲ့ ဘယျသူမဆို၊ ဘယျနရောကမဆို Twitter မှာ အလုပျလုပျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။” ဟုလညျး ကုမ်ပဏီဘကျက ကွညောခကျြတဈစောငျ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
Facebook နဲ့ Google တို့သညျလညျး အမရေိကနျနိုငျငံ၌ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ ညီလာခံမြားကို ဖကျြသိမျးခဲ့ပွီး အိုငျယာလနျနိုငျငံ၊ ဒဗ်ဗလငျမွို့ရှိ Google ရဲ့ ဥရောပဌာနခြုပျမှဝနျထမျးမြားကိုလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပြံ့နှံ့လာနိုငျသညျ့အနအေထားအတှကျ ကွိုတငျစမျးသပျသညျ့အနဖွေငျ့ အင်ျဂါနေ့၌ အိမျမှတဈဆငျ့ အလုပျလုပျရနျ ညှနျကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့အလုပျသမား (၈) ထောငျကြျောသညျ အင်ျဂါနပွေီ့း နောကျတဈနဖွေ့ဈသညျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့၌ ပုံမှနျအတိုငျး ရုံးပွနျတကျရမညျဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
ဆကျသှယျရေးကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈသညျ့ A&T နဲ့ ဘဏျလုပျငနျးကွီးတဈခုဖွဈသညျ့ Citigroup တို့သညျလညျး သူတို့ရဲ့ဝနျထမျးမြားကို နိုငျငံတကာသို့ ခရီးသှားလာခွငျး အထူးသဖွငျ့ အာရှဒသေသို့ ခရီးသှားလာခွငျးကို ကနျ့သတျထားပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံ၊ ဝူဟနျမွို့မှစတငျဖွဈပှားခဲ့သော ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈသညျ လကျရှိအခြိနျ၌ ကမ်ဘာအနှံ့သို့ ပြံ့နှံ့သှားခဲ့ပွီဖွဈပွီး သဆေုံးသူဦးရေ (၃) ထောငျကြျောအထိရှိလာပွီဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဝန်ထမ်းများကို အိမ်မှတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်သည့် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု။
နာမည်ကျော် Social Media ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twitter ကုမ္ပဏီသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများကို အိမ်မှတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ Twitter အနေဖြင့် ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ဝန်ထမ်းများကို အိမ်မှတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည့်အပြင် သူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဝန်ထမ်းပေါင်း (၅) ထောင်ကိုလည်း ရုံးမတက်ဘဲ အိမ်မှတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အဆိုပါညွှန်ကြားချက်မထုတ်ပြန်ခင် တစ်ရက်အလို၌ အလုပ်ကိစ္စဖြင့်မလိုအပ်ဘဲ ခရီးသွားခြင်း၊ ပွဲလမ်းသဘင်များသွားရောက်ခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Twitter ရဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် အကြီးအကဲဖြစ်သူ Jennifer Christie ကလည်း “ကျွန်မတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ကမ္ဘာအနှံ့နဲ့ ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြားထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Twitter သည် အိမ်မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အစီအစဉ်ကို လွန်ခဲ့သည့်ကာလများတည်းက ဖော်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး “အခုကိစ္စက ကျွန်တော်တို့အတွက် ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သလို ပိုပြီးဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသက ဝန်ထမ်းတွေကိုပါ Twitter နဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးလိုက်တဲ့ အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူမဆို၊ ဘယ်နေရာကမဆို Twitter မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။” ဟုလည်း ကု​မ္ပဏီဘက်က ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Facebook နဲ့ Google တို့သည်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ညီလာခံများကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဒဗ္ဗလင်မြို့ရှိ Google ရဲ့ ဥရောပဌာနချုပ်မှဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့လာနိုင်သည့်အနေအထားအတွက် ကြိုတင်စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် အင်္ဂါနေ့၌ အိမ်မှတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အလုပ်သမား (၈) ထောင်ကျော်သည် အင်္ဂါနေ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ ပုံမှန်အတိုင်း ရုံးပြန်တက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် A&T နဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Citigroup တို့သည်လည်း သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများကို နိုင်ငံတကာသို့ ခရီးသွားလာခြင်း အထူးသဖြင့် အာရှဒေသသို့ ခရီးသွားလာခြင်းကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့မှစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် လက်ရှိအချိန်၌ ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူဦးရေ (၃) ထောင်ကျော်အထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျကွောငျ့ အထိနာခဲ့ရသညျ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီး နှဈခု။
Next Miley Cyrus တဈယောကျ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလား ? ? ?
ကြှနျမတို့ မှာယူထားတဲ့ အစားအသောကျတှကေို လာပို့ပေးနပွေီဖွဈကွောငျးနဲ့ ကွိုတငျချေါယူထားတဲ့ Uber အငှားယာဉျက အိမျရှကေို့ ရောကျနပွေီဖွဈကွောငျး အသိပေးနတေဲ့ စာတိုလေးတှေ ဖုနျးမကျြနှာပွငျပျေါ တကျလာရငျ အတျောလေးကို ပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ …